प्रतिनिधिसभा विघटनको चौतर्फी आलोचना, कुन नेताले के भने ? – Classic Khabar
May 22, 2021 108
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातपछाडि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुका साथै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन्। मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा भंगका साथै मध्यावधि निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार निर्माण हुन नसकेको दाबी गर्दै सरकारले संसद भंग र मध्यावधि चुनाव गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार बनाउन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको दलिल मान्न नसकिने जिकिर गर्दै शुक्रबार मध्यरातमा विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन्। यो संगै अहिले सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भैरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना महामारीका बेला मध्यावधि चुनावका लागि सरकारको तयारी महंगो पर्ने बताएका छन्। प्रवक्ता शर्माले ट्विटरमार्फत संविधानको सामूहिक बलात्कारको दुष्परिणाम महँगो पर्ने पनि चेतावनी दिएका छन्।
विघटनको विरोधमा विवेकशील साझा पार्टीपनि उत्रेको छ । पार्टीका संयोजनक मिलन पाण्डेयले प्रम र राष्ट्रपति मिलेर संसदको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘यो सत्ता कव्जा गर्ने षडयन्त्र हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘हामी चुप लागेर बस्दैनौ ।
माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनले लोकतन्त्रमाथीको प्रहार भन्दै संविधन कुल्चेको बताएका छन् । ‘मध्यरातमा डकैती गरियो,’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शुक्रबार र मध्यरातमै रोज्थे ।’ नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले गैरराजनीतिक र गैरसंबैधानिक कदमले देशलाई काहालिलाग्दो द्धन्दमा लगेको बताएका छन्।
Prevकोरोना भाइरस हुँदा बिरामीका आँखा बिगार्ने घातक कालो ढुसीको सङ्क्रमण नेपालका यी ठाउँमा देखा पर्न थाल्यो, अब कसरी जोगिने
Nextटिकटकबाट अव नेपालमा पनि आम्दानी हुने, यस्तो छ तरिका !
इन्टरनेटमा यस्तो भिडियो हेरेपछि श्रीमतीलाई नै……